ပရိသတ်​​တွေအ​နေနဲ့ အနုပညာ​လောကမှာ သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် မြင်​တွေ့လိုတဲ့ K-Pop Idol ​(၇) ဦး | News Bar Myanmar
ပရိသတ်​​တွေအ​နေနဲ့ အနုပညာ​လောကမှာ သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် မြင်​တွေ့လိုတဲ့ K-Pop Idol ​(၇) ဦး
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ မင်းသားမင်းသမီး ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဝက်​လောက်ဟာ K-Pop Idol ​တွေက​နေ ဆင်းသက်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အဆိုအကတင်သာမက သရုပ်​ဆောင် အရည်အချင်းပါရှိတဲ့ K-Pop Idol ​တွေကို ခု​နောက်ပိုင်း ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာ ပိုပြီး ​နေရာ​ပေးလာတာကိုလည်း ​တွေ့ရမှာပါ။
ထို့​ကြောင့် Star Play app က​နေ ပရိသတ်​​တွေအ​နေနဲ့ သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် မြင်​တွေ့လိုတဲ့ K-Pop Idol ​တွေကို ဧပြီလ ၂၉ ရက်​က​နေ ​မေလ ၁၃ ရက်​နေ့အထိ Vote ​ပေး​ရွေးချယ်​စေခဲ့ပါတယ်။ ထို​ရလဒ်အရ ထိပ်ဆုံး (၇) ဦးစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Idol ​တွေက​တော့…
Jinyoung ဟာ Voting ရလဒ် ၇၁.၅% နဲ့ ပထမ​နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက “Dream High 2” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Jung Eui Bong ဇာတ်​ကောင်နဲ့ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး ထိုနှစ်မှာပဲ MBC ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ “WhenaMan Falls in Love” မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့​နောက် ကြားထဲမှာ ခဏနားပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “This Is My Love” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပိတ်ကားထက်ကို ပြန်လည်​​ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “A Stray Goat” ရုပ်ရှင်ကားမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့သလို “Legend of the Blue Sea”ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Lee Min Ho ရဲ့ ငယ်ဘဝအဖြစ် သရုပ်​ဆောင်က လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မက​သေးပဲ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ “He is Psychometric” ဆိုတဲ့ အချစ်ဟာသကားနဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ “When My Love Blooms” ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေမှာလည်း သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ​​တော့ Jinyoung ဟာ tvN က​နေ ဇွန်လမှာ ထုတ်လွှင့်သွားမယ့် “Devil Judge” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။
ဒုတိယ​နေရာကို ၁၂.၈၇% နဲ့ ​ရရှိသွားတာက​တော့ ATEEZ အဖွဲ့ဝင် Yunho ဖြစ်ပါတယ်။ Jinyoung နဲ့ မတူပဲ သူဟာ ဒီနှစ်မှ ပွဲဦးထွက်တဲ့ သရုပ်​ဆောင်အသစ်စက်စက်​လေး ဖြစ်ပါတယ်။ Yunho, Jongho, Seonghwa နဲ့ San စတဲ့ ATEEZ အဖွဲ့ဝင် ၄ ​ယောက်ဟာ လက်ရှိပြသ​နေတဲ့ KBS2 ရဲ့ “Imitation” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်ထားပြီး Yunho က အဓိကဇာတ်​​ဆောင်​တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Yunho က ထိုဇာတ်လမ်းထဲမှာ ​အောင်မြင်ခါစ ​ယောကျ်ား​လေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Sparkling အဖွဲ့ဝင် Lee Yu Jin အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပြီး Lee Yu Jin ဟာ သူ့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း Lee Ma Ha ကို တစ်ဖက်သတ်ချစ်​နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Yunho ရဲ့ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲဆို​ပေမယ့် သရုပ်​ဆောင်​ကောင်းမွန်မှု​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိလျက်ရှိပါတယ်။
Voting ရလဒ် ၉.၁၉% နဲ့ တတိယ​နေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့တာက​တော့ EXO အဖွဲ့ဝင် Sehun ဖြစ်ပါတယ်။ EXO အဖွဲ့ဝင် အားလုံးနီးပါးဟာ အဆိုအကတင်သာမက သရုပ်​ဆောင်ပါ ထူးချွန်ကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ Sehun ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက “To The Beautiful You” ဇာတ်ကားမှာ ဧည့်သည်သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ပြီး သရုပ်​ဆောင်အ​နေနဲ့ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့​နောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Welcome to Royal Villa”, ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “EXO Next Door”, ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Dokgo Rewind” စတဲ့ ဇာတ်လမ်း​တွေနဲ့ သရုပ်​ဆောင်အရည်အချင်းကို ဆက်လက်ပြသခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ “Dear Archimedes” ဆိုတဲ့ တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာပါ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါ​သေးတယ်။ ဒါတင်မက​သေးပဲ သူဟာ ယခုနှစ်ထဲမှာ “Catman” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားသစ်လည်း ရိုက်ကူးထားပြီး”Now, We are breaking up” ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ “The Pirates: Goblin Flag” ရုပ်ရှင်ကားမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်​​​ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. Kim Donghyun (AB6IX)
ပရိသတ်​တွေ သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် မြင်​တွေ့ချင်ကြတဲ့ ​နောက်ထပ် Idol တစ်ဦးက​တော့ AB6IX အဖွဲ့ဝင် Kim Donghyun ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Voting စုစု​ပေါင်းရဲ့ ၂.၈၃% ကို ရရှိခဲ့တာပါ။ သူဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်က ပြသခဲ့တဲ့ “Let Me Off The Earth” ဆိုတဲ့ web drama မှာ ဧည့်သည်သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး သရုပ်​ဆောင်အ​နေနဲ့ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့​နောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ် ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Convenience Store Fling” ဆိုတဲ့ web drama မှာ ပါဝင်ပြီး သရုပ်​ဆောင် အရည်အချင်းကို ပိုမိုပြသခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် သူဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးသွားမယ့် “I’ll Become Your Knight” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ LUNA ဆိုတဲ့ ​ယောကျ်ား​လေးအဖွဲ့ရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင် Ga On ​နေရာက ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
​နောက်ထပ်တစ်​ယောက်က​​တော့ Wannaone အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်းဖြစ်ပြီး solo artist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Yoong Jisung ဖြစ်ပါတယ်။ Voting ​စုစု​ပေါင်းရဲ့ ၁.၈၇% နဲ့ နံပါတ် ၅ ​နေရာကို ရရှိခဲ့တာပါ။ သူဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲ​ရော ရုပ်ရှင်ကားမှာပါ တစ်ခါမှ သရုပ်မ​ဆောင်ဖူး​သေးတဲ့ Idol တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သို့​သော်လည်း သူဟာ AB6IX အဖွဲ့ဝင် Kim Donghyun နဲ့အတူ “I’ll Become Your Knight” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ LUNA ဆိုတဲ့ ​Idol အဖွဲ့ရဲ့ ဒရမ်တီးသူဖြစ်လို က​လေးသရုပ်​ဆောင်တစ်​ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Kim Yoo Chan ဇာတ်​ကောင်ကို ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
6. Dawon (SF9)
SF9 ဟာ သရုပ်​ဆောင်​ကောင်း​တွေရှိ​နေတဲ့ ​နောက်ထပ် ​ယောကျ်ား​လေး idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့​ကြောင့် SF9 အဖွဲ့ဝင်တစ်​ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dawon ကလည်း Voting ရလဒ် ၀.၉၅% နဲ့ ဒီစာရင်းထဲကို ပါဝင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Click Your Heart” ဆိုတဲ့ web drama မှာ Da Won ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပဲ အဓိကဇာတ်​ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ပြီး ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့​နောက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ “Was it love?” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဧည့်သည်သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် အခုလက်ရှိ tvN ရုပ်သံလိုင်းက​နေ ပြသ​နေတဲ့ “Doom At Your Service” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မင်းသမီး Park Bo Young ရဲ့ ​မောင်ဖြစ်သူ​နေရာက သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
NU’EST အဖွဲ့ဝင် Minhyun က​တော့ Voting စုစု​ပေါင်းရဲ့ ၀.၃၅% ကို ရရှိပြီး စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ “Reckless Family Season 3” မှာ ဇာတ်ပို့​နေရာက ပါဝင်ပြီး သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့​နောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ “Their Distance” ဆိုတဲ့ ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သရုပ်​ဆောင်​​လောကအထိ ​ခြေဆန့်ခဲ့ပါတယ်။
Next အေဂျင်စီနဲ့ လမ်းခွဲပြီး ကိုယ်ပိုင်လမ်းသစ်ကိုလျှောက်လမ်းကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ G Friend »
Previous « “Doom at Your Service” Drama အတွက် ost ဇာတ်ဝင်တေးသီချင်းများ သီဆိုထားတဲ့ Baekhyun, TXT, Alice ….etc